Inona no tokony ho fantatro momba ny fikarohana sandoka Amazon mba ho lasa mpivarotra tsara?
Ny mpivarotra am-pivarotana amin'ny aterineto rehetra mivarotra amin'ny Amazon dia mahalala fa ny fikarohana dia mety ho lasa fototra mafy orina ho an'ny orinasam-pitaterana mampiroborobo. Ary avelao hiatrika izany avy hatrany - Ny fahazoana mpanjifa amin'ny Amazon dia mila fikarohana sy fahatakarana lalina, mazava ho azy, raha toa ka tianao ny lisitry ny vokatrao ho tsara sy naseho teo amin'ireo valin'ny fikarohana. Farany - hamokaranao ny fifamoivoizanao bebe kokoa amin'ny teny fanalahidy manan-danja, izay mampitombo ny fifanakalozanao. Saingy ny zavatra dia tsy toy ny motera fikarohana lehibe (toa an'i Google mihitsy, sy Yahoo, na Bing), ny algorithm amin'ny algorithm amin'ny algorithm amin'ny algorithm dia manana ny "manokana" azy manokana. Midika izany fa amin'ny fomba fijerin'ny Search Engine Optimization (SEO), ianao dia tsy soso-kevitra hitazona amin'ny ankapobeny amin'ny Google AdWords, farafaharatsiny raha ny fikarohana ny teny fikarohana amazonin'i Amazon. Ny zavatra dia ny tsara indrindra ho an'ny Mpandika Teny Keyword amin'ny fahatakarana ny fivoaran'ny fikarohana mivantana. Etsy andaniny anefa, io fitaovana fototra io dia tsy afaka manangona tahirin-kevitra marina tanteraka izay ilaina mba ahafahana mifidy tsara ny teny fanalahidin-tsarimihetsika tsara indrindra ho an'ny lisitra vokarin'ny vokatra tsara izay mijanona foana eny an-tampon'ilay fikarohana - cloud technology services in Portland.
Amazon SEO sy Algorithm Product Ranking
Ndeha hojerentsika lalindalina kokoa ilay raharaha ary jereo ny fomba fiasan'ny A9 (algorithm). Raha jerena fa ny A9 no tena mikarakara ny fividianana ankapobeny ao amin'io sehatra mivarotra an-tserasera io, ny lisitry ny SERP dia mifototra amin'ireo antony roa fototra roa ireo:
- midika fa ny singa manana laza tsara sy ny tantaran'ny fivarotana dia azo inoana kokoa ny hampiseho kokoa ny fikarohana amin'ny vokatra Amazon. Ny môtera Performance Performance dia ny CTR (click-through-rate), CR (tombam-bolana), ary mazava ho azy ny fivarotana ny harato.
Ny anton'ny fahamendrehana - dia mandresy lahatra tsara ny lohateny, ny famaritana sy ny bala tsara ho an'ny teny fanalahidy tsara indrindra (izany hoe mifanaraka amin'ny fangatahan'ny fikarohana nangatahan'ireo mpivarotra mivantana) - Hanana tombontsoa lehibe amin'ny fampisehoana amin'ny sehatry ny vokatra Amazon koa.
Amazon Keyword Research miaraka amin'ny fitaovana manokana
Noho izany, andao hiatrika izany - fomba fijery hafa (mihoatra noho ny fandinihan-teny fototra amin'ny SEO). Ary ny tena zava-dehibe dia ny tokony hifantohana amin'ny zavatra hafa. Izany no mahatonga ahy manoro hevitra ny fisafidianana ny fitaovana maotina amin'ny teny malaza ho an'i Amazon ary hikaroka fikarakarana fikarohana mety ahafahanao mamorona fifanakalozan-kevitra tena misy amin'ny fifaneraserana bebe kokoa. Raha ny amiko, izaho manokana dia nampiasa fitaovana fikarohana fototra Sonar Amazon. Mazava ho azy, tsy misy afa-tsy ny manapa-kevitra hoe iza no fitaovana na votoaty an-tserasera tokony hofidiana. Na izany na tsy izany, amin'ny fampiasana Sonar aho dia misy tombontsoa tena mandresy lahatra, toy ny fanalefahana lisitra haingana haingana amin'ireo soso-kevitry ny teny fanalahidy tsara indrindra (izay toa niseho ho fiandohan'ny fanombohana tsara), fikarohana fifaninanana (manomboka amin'ny endri-tsoratra fohifohy mivantana - mivantana avy amin'ny tena mahavariana ny mpivarotra), fijerena laika sy fandinihan-javatra mahaliana momba ny mety hahazoana fandaharana fikarohana azo omena eto sy amin'izao fotoana izao, ary betsaka kokoa.